I-Xiaomi Mi 11T Pro: izinto ezinokwenzeka, iinkcukacha, amaxabiso kunye nomhla wokukhutshwa | I-Androidsis
I-Xiaomi Mi 11T Pro: amanqaku anokubakho, iinkcukacha, amaxabiso kunye nomhla wokukhutshwa
UXiaomi ulungiselela ukumiliselwa kwe-smartphone entsha, kwaye imalunga ne I-Pro yam ye-11T, mobile yokusebenza okuphezulu okuya kuba yinxalenye yoluhlu oluphambili kakhulu lomenzi waseTshayina ukuza kuthi ga ngoku.
Kwaye sele kukho intetho eninzi malunga Iimpawu kunye neenkcukacha zobugcisa kwesi sixhobo, ke sele sazi ukuba silindele ntoni kuyo, kunye neenkcukacha zexabiso elinokubakho kunye nomhla wokumiliselwa ukuba le smartphone ikwisikhundla esiphezulu inokuqhayisa.
1 Zonke iimpawu kunye nokuchazwa kobuchwephesha esikwaziyo ukuza kuthi ga ngoku kwiXiaomi Mi 11T Pro
2 Ixabiso kunye nomhla wokukhutshwa kweXiaomi Mi 11T Pro
Zonke iimpawu kunye nokuchazwa kobuchwephesha esikwaziyo ukuza kuthi ga ngoku kwiXiaomi Mi 11T Pro
Ngokwokuvuza okutsha kunye nokuthelekelela okuvelileyo, iXiaomi Mi 11T Pro iya kuba yifowuni efowuni eya kuthi ifike kwintengiso Iscreen setekhnoloji ye-AMOLED eya kuba nenqanaba lokuhlaziya eliphezulu le-120 Hz. Oku kuyakuvumela ukutyibilika kunye nobushushu bube bukhulu xa kufikwa ekuhambiseni ujongano, ukusebenzisa usetyenziso kunye nemidlalo, kunye nokwenza nawuphi na omnye umsebenzi ngokwemixholo yemultimedia.
Ngale ndlela, iXiaomi Mi 11T Pro iya kuba nepaneli enesakhelo esincitshisiweyo, njengoko sinazo kwiimodeli ezahlukeneyo ze 11 yam. Ukongeza, iya kuba nomngxunya kwiscreen kwikona ephezulu ngasekhohlo, ukulungiselela indlu inzwa yangaphambili yekhamera enokuba sisisombululo se-20 MP, njengeMi 11 yoqobo, ke kulo mba ngekhe kubekho zinguqulelo zenoveli.
Ngokubhekisele kwikhamera yangemva yale mobile, iXiaomi Mi 11T Pro iya kwenza, ngokweengxelo, ze Inkqubo kathathu apho i-MP eyi-108 ephambili inokukhethwa. Nangona kunjalo, kuthiwa le fowuni inokuba nesisombululo esisezantsi se-MP ye-64, nangona oku kubonakala ngathi akunakulindeleka. Okwangoku, kuya kuhlala kubonakala.
Ngokubhekisele kwezinye izinzwa zokufota, ifowuni iya kuba nemodyuli kathathu ene-13 okanye 8 MP ye-angle-angle sensor kunye ne-5 MP macro camera. Ukuba iza kuza nemodyuli ye-quad, isivamvo sokugqibela sinokuba yi-2 MP kwaye sinikezelwe kwisiphumo sokufiphala kwentsimi. Ukongeza koku, ifowuni iya kuba nefleshi ephindwe kabini ye-LED yokukhanya kwezigcawu zasebusuku nalapho ukukhanya kukungalunganga kakhulu.
Iprosesa chipset eza kusetyenziswa yile fowuni iya kuba yiyo IQualcomm Snapdragon 888, isiqwenga esinamandla amaninzi anika intsebenzo yodidi oluphezulu, esenza esi selula sibe sisiphelo esipheleleyo. Kwaye le SoC iyakwazi ukusebenza ngewotshi ephezulu ye-2.84 GHz.Kwaye, iza ne-Adreno 660 GPU, eyona inamandla kumxholo wemultimedia kunye nemidlalo ephezulu yokusebenza.
Kwelinye icala, le fowuni iya kukhutshwa nge Inkumbulo ye-RAM ye-6 okanye ye-8 GB. Kuhlala kubonakala ukuba iya kufumaneka kwiinguqulelo zombini, nokuba iya kubonelelwa nge-128 kunye / okanye i-256 GB yendawo yokugcina yangaphakathi. Ewe kunjalo, akulindelanga ukuba kufike kunye nenkxaso yokwandiswa kwememori ngekhadi le-MicroSD, kuba ukusuka kuthotho lweMi 10 ukuya kwiMi 11, yeyangoku, ayibonwa naphi na.
Ngakolunye uhlangothi, ibhetri iya kuba nomthamo we-5,000 mAh, entle intle. Ewe, eyona ilungileyo ayikho kuyo, kodwa kwitekhnoloji yokutshaja ngokukhawuleza apho iXiaomi Mi 11T Pro iya kuhambelana, eyi-120 W. Ngale nto, ibhetri iya kuhlawuliswa ukusuka kwinto engenanto ukuya ngokupheleleyo phakathi kwemizuzu engama-30 ukuya kwengama-40. Igalelo, ewe, liya kuba luhlobo lwe-USB C.
Ezinye izinto zeXiaomi Mi 11T Pro inokubandakanya umfundi osisikrini esingaphantsi kwescreen kunye nenkqubo yokusebenza ye-Android 11 phantsi kwe-MIUi 12.5 njengoluhlu lokwenza ngokwezifiso. Enye into eya kuthi ifowuni ibe nayo kukudityaniswa kwe5G, kuba i-Snapdragon 888 eya kuba nayo ngaphakathi iza nemodem edityanisiweyo ekwaziyo ukuxhasa le nethiwekhi.
Ewe ayizukuchasana namanzi, kodwa iya kukhuselwa nge ICorning Ixhoba leGlasi yeGorilla, Iglasi yeCorning eyona inzima ukuza kuthi ga ngoku; oku kuya kuxhotyiswa ngasemva kwaye, ewe, ngaphezulu kwescreen secebo. Kuya kuza ne-NFC yokwenza intlawulo ngaphandle kokunxibelelana, ukutshaja umva, kunye ne-infrared sensor yokulawula izixhobo zangaphandle ezinje ngeethelevishini kunye nokunye.
Ixabiso kunye nomhla wokukhutshwa kweXiaomi Mi 11T Pro
Iselfowuni kulindeleke ukuba ibe sisiphelo esiphakamileyo, kodwa ngexabiso elifikelelekayo, xa kuthelekiswa neMi 11 kunye neMi 11 Pro.Ngoko ke, siyathetha ngaloo nto inokuthi ifike kwimarike malunga nee-euro ezingama-600. Nangona kunjalo, kunokwenzeka ukuba izokwaziswa okokuqala e-China, ukuze ixabiso libe lelona liya kuhambelana notshintsho lomzuzu. Ukongeza, umhla we-23 kweyoMsintsi lusuku ekujoliswe kulo kuphehlelelo lwayo lwehlabathi, nangona siza kuqinisekisa okanye siphikise kamva ukuba iyakuphehlelelwa ngokwenyani kwilizwe liphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Xiaomi Mi 11T Pro: amanqaku anokubakho, iinkcukacha, amaxabiso kunye nomhla wokukhutshwa
Ushicilelo lweRealme Master Master, uyilo lwaseJapan lokucinga ngempumelelo [Uhlalutyo]
I-Oukitel WP15: iinkcukacha, ixabiso kunye nokufumaneka